Yeyiphi impawu ekufuneka ibe yeyona sonar ilungileyo yokuloba? Ngeentlanzi
Xa sisiya kuloba sineentlobo ezimbini zendlela. Enye yeyesintu apho siphosa intonga silinde ixesha kunye nekhonkco. Kwesinye isimo kwinto esifuna ukuba namashwa kwaye kuyo, sisebenzisa indawo yokuloba. Le ndawo isivumela ukuba siyazi indawo apho kunokwenzeka khona ukubambisa. Yinkqubo esebenza ngokulula nesinika ulwazi olwaneleyo lokufumana intsebenzo engcono kwiiseshoni zethu zokuloba. Kodwa ziziphi iimpawu ezifanele ukuba neyona sonar ilungileyo yokuloba?
Kule nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi eyona sonar yokuloba.
1 Iimpawu ezinokuthi zibenayo eyona sonar yokuloba
2 Amandla kunye nenkqubo yokulinganisa eyona sonar yokuloba
3 Ukunikezelwa kwedatha ukuba i-sonar efanelekileyo yokuloba kufuneka ibe nayo
4 Amandla kunye nokusebenza
5 Eyona sonar ilungileyo yokuloba
5.1 Inkqubo yokufumana iintlanzi nzulu
5.2 IGearmax 100M yokufumana okunzulu
Iimpawu ezinokuthi zibenayo eyona sonar yokuloba
Kukho ezinye iindidi ze-sonar zokuloba ezinamaxesha aphindwe kabini kunye nonxibelelwano lweWi-Fi. Ezi mpawu zisenza ukuba sikwazi ukubona kakuhle iziphumo zophando ngokuthe ngqo kwiselfowuni. Ihlala iyintandokazi ngabasebenzisi ukusukela Banokusebenza ukuya kubunzulu beemitha ezili-100 kwaye inesikrini seLCD. Ezi zelanga azilungelelanisi ngokwaneleyo kukhangelo lweentlanzi ezinokubanjiswa elwandle kwabo bantu banomonde kancinci.
Xa sijonga iintlanzi elwandle nasemlanjeni okanye ecaleni, uncedo lwendawo yokuloba inomdla kakhulu. Ingathi singayifunda into esemazantsi olwandle kwaye ngale ndlela sinokufumana ixhoba ngokulula. Singabazi ubunzulu kunye nobungakanani bazo kwaye ngaloo ndlela siphucule amathuba okufumana into. Ukuba ufuna ukufumana eyona sonar yokuloba, apha siza kwalatha into ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuze indawo yokuloba ikumgangatho olungileyo.
Amandla kunye nenkqubo yokulinganisa eyona sonar yokuloba
Olu lolunye lwezinto eziguquguqukayo ekufuneka ukuba indawo enemveliso ibe nayo. Iqalisa amaza esandi kwaye ixhomekeke kwindlela ezibhabha ngayo izinto, iyabaleka ngokwazi ukuba ngowuphi umgama kwaye bubunzulu obungakanani. Kunjengokungathi sisebenzisa uhlobo lweeradar ezinjengezo ezinye iicetaceans zinazo. Le nkqubo yokufunyanwa kwelanga isekwe kulo mthetho-siseko.
Nangona kunjalo, kukho umahluko phakathi kweemodeli ezahlukeneyo kunye nendlela abasebenza ngayo. Njengokuba, ayizizo zonke i-sonars ezibuyisa izinto ngendlela efanayo kwaye awunakuxela ukuba zeziphi iintlobo zezinto ozifumeneyo. Uluhlu olukhulu lweaudiyo olusetyenzisiweyo ngakumbi unokukwazi ukuba kukho ntoni kwaye unokusebenza nzulu. Oku kuya kugqitywa ngomgangatho wonyana.
Xa kufuneka sikhethe imodeli enye okanye enye, kuya kufuneka sazi ukuba sinzulu kangakanani iintlanzi rhoqo. Kule nkalo okanye, sinokubandakanya iintambo ezinde ukuze unyuse uluhlu. Ukuba sinezivamvo ezizimeleyo, sinokuzivumela ukuba siqhubele phambili kuphando lwethu.
Ukunikezelwa kwedatha ukuba i-sonar efanelekileyo yokuloba kufuneka ibe nayo
Yenye yeenguqu ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa sikhetha eyona sonar yokuloba. Kwaye ukuba xa besinike idatha, kufuneka ilungiswe kwisignali yesandi. Idatha ihlala iboniswa kwiscreen kwaye inokuchazwa ngokulula. Idlalwa njani le datha kwiscreen inokwenza umahluko kwindleko yesonar ekulobeni. Kukho iimodeli ezinesikrini esikwinqanaba eliphezulu esakhelweyo esenza ukuba kulunge ukuhlawula ixabiso.
Kwiimodeli ezahlukeneyo ezikhoyo singazifumana izikrini zeLCD ngomgangatho onomdla. Zizikrini ezifana nezo zeewotshi eziqhelekileyo apho iziphumo ziboniswa kugqithiso. Eyona nto ikumgangatho ophezulu zezi zikrini ze-LED ezithi, nangona zinobungakanani obuqinileyo, zibonelela ngomgangatho ophezulu womfanekiso. Kolu hlobo lwesikrini, ngcono isisombululo kunye nobungakanani bomfanekiso, kokukhona sinokubona yonke into icace gca. Gcina ukhumbula ukuba uninzi lwamaxesha esiya kuloba ebusuku. Kulapho kubalulekile ukuba idatha itolike ngokulula.
Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba iimodeli ezigqame kakhulu kulo mba zezo zisebenzisa iselfowuni yethu njengesikrini. Ke, asidingi ingqokelela yobalo kwaye idatha inokuthunyelwa kwisiphelo sendlela, apho sinokuzibona ngobukhulu obukhulu kunye nomgangatho olungileyo. Oku kwenza ukuba kube lula ukujonga, ukuphatha, kunye nokuthumela idatha apho ifuneka khona.
Amandla kunye nokusebenza
Ezi zinto zixabisekileyo zibalulekile. Ukusebenziseka lula kwemveliso kubalulekile xa ukhetha eyona sonar yokuloba. I-sonar ekunzima ukuyisebenzisa okanye ayinayo impilo elungileyo yebhetri ayisiyomveliso ilungileyo. Iimodeli ezilungileyo zezo zineebhototeras ezisivumela ukuba sihambe ngokulula kwiindlela ezahlukeneyo zeqela liphela. Ukuba, ukongeza, inomsebenzi wokusondeza, sinokuskrola kwizinto ezikwiskrini ukubona yonke into ibhetele ngakumbi. Olona khetho lulungileyo zezo zisekwe kwizicelo zeselfowuni kwaye zezona zilungileyo ngokwemiqathango yokuhlangabezana nale mfuno.
Ibhetri elungileyo yokuloba elangeni yeyona inobuncinci ubomi obuluncedo beeyure ezi-5 ukuya kwezi-6 zilandelelana. Ukuba kuyinyani ukuba kukho iimodeli ezinikwe ibhetri, kodwa ekuphela kwento eya kubuyela umva, kule meko, kukuba kufuneka uziphathe endaweni yazo.
Inkqubo yokufumana iintlanzi nzulu
Le modeli inethuba elinalo ithuba lokujonga kwiscreen se-smartphone yakho imbonakalo yento eyenzekayo emanzini. Olu luncedo olukhulu lokuba nempumelelo engcono okanye ngosuku lokuloba.
Ingayiyo eyona nto iphambili kukuba ubomi bebhetri ziiyure ezingama-5.5. Le bhetri isenokungonelanga kwaye iinjongo zethu kunzima ukufikelela kuzo. Ukuba ufuna ukufumana enye yazo, cofa apha.
IGearmax 100M yokufumana okunzulu
Le modeli yenzelwe ukuloba ngokwesiko. Inesikrini seLCD kunye nokufaka iintambo ukuya kuthi ga kwi-7.5 yeemitha. Unokuvavanya ukuya kuthi ga kubunzulu beemitha ezili-100. Iziphumo zibonisiwe kwiscreen kwaye inesalathiso esihle sobuntununtunu kunye nokuma kwexhoba elinokubakho. Umzekelo opheleleyo wokuba nexabiso elihlengahlengisiweyo. Ungayithenga ngokuchofoza apha.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungakhetha eyona sonar yokuloba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Eyona sonar ilungileyo yokuloba